MAILHOL : Natosiky ny mpino Apokalipsy ho kandidà 2018. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE MAILHOL : Natosiky ny mpino Apokalipsy ho kandidà 2018.
MAILHOL : Natosiky ny mpino Apokalipsy ho kandidà 2018.
By Nirinaaoût 06, 2017, 06:22 0
« Reko ny fitarainan’ny vahoaka sy ny fahoriany rehetra. Nantsoin’Andriamanitra hamonjy ny vahoaka Malagasy aho. Niainga tao amin’ny fiangonana izany ary 20 taona nitondrana vahoaka ».
Nambaran’ny filohan’ny fiangonana Apokalipsy, Mailhol tamin’ireo mpino ny ho filatsahany ho kandidà filoham-pirenena amin’ny taona 2018. Nandritra ny famaranana ny faha-20 taonan’ny fiangonana Apokalipsy sy ny fisokafan’ny faha-20 taonan’ny radio Fanambarana izany teny amin’ny Coliseum Antsonjobe tamin’ny Sabotsy 05 Aogositra 2017 lasa teo.
Miankina amin’ny antoko GFFM.
Antoko no handrotsaka azy ho kandidà ka hanao fivoriana ireo ao amin’ny antoko GFFM na Gideona Fandresena Fahantrana eto Madagasikara handinika izany fanambarana nataony izany. Nambarany fa raha manaiky ity antoko ity, vonona izy hirotsaka ho fidiana. Tompo-kevitra tamin’ny fananganana ity antoko ity ny pastora Mailhol. Ny 03 janoary 2011 no nampahafantarina tamin’ny vahoaka ny fisiany. Izy noho izany ny filoham-boninahitra ity GFFM ity. Miankina amin’ity antoko ity izany ny ho filatsahany.
Mifampitohy tamin’ny faminaniana.
Raha ny faminaniana azony ny taona 2003, izy no ho filoham-pirenena tamin’ny taona 2013 kanefa tsy tanteraka izany. Nambarany fa mifampitohy amin’io faminaniana io ihany izao filatsahany izao. Andriamanitra tsy diso raha nanambara izany faminaniana izany taminy fa ny fiangonana no diso fanisa, hoy izy. « Raha ny faminaniana azoko dia 10 taona taorian’ny 2003 no ho filoha izy kanefa mbola niampy izany fa hisy filoha roa hitondra. Noho izany, taorian’ny filoha Marc RAVALOMANANA no natao ny fanisana. Efa teo i Andry RAJOELINA filohan’ny tetezamita ary ny faharoa i Hery RAJAONARIMAMPIANINA filoha ankehitriny ».
Malalaka ny fiangonana rehetra.
Tsy hanakatona fiangonana ny pastora Mailhol raha tonga eo amin’ny fitondrana ary tsy hitaona ny vahoaka ho lasa Apokalipsy. Malalaka noho izany ny fiangonana ary manja ny safidin’ny vahoaka izy amin’ny finoana maha resy lahatra azy. Tsy ho filohan’ny fiangonana Apokalipsy intsony aho, hoy izy fa filohan’ny vahoaka Malagasy rehetra.
Anao fanorenana ifotony.
« Manana fandaharan’asa sy vina aho heverina fa hampandroso sy anala amin’izao fahantrana lalina izao ary efa 20 taona no nanomana ». Vonona izy hifampiresaka amin’ny olona rehetra, ny antoko politika, ireo sedika izay manana fandaharan’asa izay am-pandrosoana ity firenena ity. Hanaovana fanorenana ifotony no antony izany. Efa 20 taona no niomana izy ka tsy hisalasala amin’ny fiaraha-miasa amin’ny rehetra, hoy hatrany izy.
Nomarihany fa tsy hanohana kandidà intsony amin’ity fifidianana ho avy ity intsony. Nidika izany ve fa nanohana kandidà i Pastora Mailhol teo aloha ?
Previous PostZANAK’ANDROY : Tsy mankasitraka ny fifampirafesana amin’ny faritra hafa. Next PostSCAA : Tsy mifidy toerana ny masom-boly vokariny.